कालो बाथरूमको नल अलग ह्याण्डल स्विभल टाउकोको साथ
शावर स्तम्भ सेट
घर / बाथरूमको नल / डबल ह्यान्डल बाथरूम नल / WOWOW कालो बाथरूम नल अलग ह्याण्डल स्विभल टाउको संग
WOWOW कालो बाथरूम नल अलग ह्याण्डल स्विभल टाउको संग
रेटेड 4.915बाहिर आधारित 23 मूल्यांकन ग्राहक
ठोस काँसा सामग्री अन्य धातुको तुलनामा राम्रो छ
जंग, जंग सम्बन्धी मुद्दाहरूको बारेमा चिन्तित हुनु आवश्यक पर्दैन।
उच्च गुणवत्ता सामग्री, रखरखाव को सजिलो, उच्च स्थिरता, जीवन संग लामो।
2320300B स्थापना निर्देशन
तपाईंको बाथरूम faucets 2320300B छनौट गर्दै
जब तपाईं बाथरूमको डिजाईन वा पुन: डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं बाथरूमको नलको प्रभावलाई हल्कासित लिन सक्नुहुन्न। यी सम्भवतः तपाईको बाथरूममा साना साना वस्तुहरू हुन्, तर यसको बाबजुद पनि ती तपाईको बाथरूमको प्राकृतिक फोकस पोइन्ट हुन्। जो कोही तपाईंको बाथरूममा प्रवेश गर्छन्, पहिले बाथरूमको नललाई स्वचालित रूपमा हेर्छ। त्यसकारण तपाईको बाथरूमको नल राम्रोसँग छनौट गर्न यो अत्यन्त प्रासंगिक हो। बाथरूमको नल धेरै शैली, आकार र डिजाइनहरूमा आउँदछन्। सहि बाथरूमको नल छनौटको परिणाम स्वरूप केहि कसैको लागि चुनौती हुन सक्छ। सहि बाथरूमको नलले तपाईको बाथरूमलाई व्यक्तिगत स्पर्श दिन सक्दछ जुन वास्तवमा चाहिन्छ। यो तपाइँको बाथरूम को उपस्थिति मा एक संपूर्ण.differences बनाउन सक्नुहुन्छ। तर सबै भन्दा, बाथरूम faucets तपाइँको बाथरूम को समग्र शैली मिल्नु पर्छ। त्यसकारण तपाईले बाथरूमको नलका सबै पक्षलाई विचार गर्न चाहानुहुन्छ तपाईले छनौट गर्न खोज्नु भएको छ। यद्यपि यो नबिर्सनुहोस् कि तपाईको बाथरूमलाई डिजाईन वा पुनः डिजाइन गर्ने कार्य धेरै रमाईलो घटना हो। तपाईं आफ्नो नयाँ स्फूर्ति पूर्ण नयाँ बाथरूम डिजाइन गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। हामीलाई हाम्रो स्टाइलिश कालो व्यापक बाथरूम नलको साथ मद्दत गर्न दिनुहोस्।
स्टाइलिश व्यापक बाथरूम नल
एक व्यापक बाथरूम नल र अन्य फिक्स्चर बीच मुख्य भिन्नता, ह्याण्डलको स्थिति हो, दुबै तातो र चिसो। एक व्यापक बाथरूम नलमा ह्यान्डलहरू नलको प्रत्येक पक्षमा राखिन्छन्। केन्द्र सेट faucets मा उदाहरण को लागी, तपाईं सिंक मा ड्रिल एकल छेद को उपयोग गर्नुहोस्। अर्कोतर्फ, उदाहरणका लागि एक प्वाल नलको साथ, तपाईं केवल एक मात्र ह्यान्डलको साथ तातो र चिसो पानी नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विपरीत, एक व्यापक बाथरूम नल संग तपाईं बाथरूम सिंक मा तीन प्वाल ड्रिल गर्न आवश्यक छ र तपाईं पानीलाई तातो र चिसो पानी दुबै अलग दुई ह्याण्डलको साथ नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। पानीको तापक्रम ठीकसँग नियन्त्रण गर्न सजिलो बनाउँदछ। एक व्यापक बाथरूम नल छनौट गर्दा, तपाईं बिभिन्न विकल्प र समाप्त प्रस्ताव छन्। तपाईं कालो रंगको साथ तपाईंको डेकरमा गहन प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ। यो निश्चित रूप मा तपाइँको व्यापक बाथरूम नल आफ्नो बाथरूम मा एक आँखै आकर्षक वस्तु बनाउने छ। यसका साथै तपाईले कार्यक्षमता चयन गर्नुपर्नेछ। तपाइँ तपाइँको कालो फराकिलो बाथरूम नल के गर्न चाहानुहुन्छ? जब तपाइँले छनौट गर्नुहुन्छ, कालो फराकिलो बाथरूम नललाई तपाइँको नयाँ बाथरूम डिजाइनको नयाँ केन्द्र बिन्दुको रूपमा चयन गर्नुहोस्।
कालो व्यापक बाथरूम नल
कालो तपाईंको बाथरूम सजावटमा नाटकीय विकल्प हुन सक्छ। विशेष गरी जब तपाईको बाथरूममा अन्य कालो तत्वहरू हुन्छन्। कालो फराकिलो बाथरूम नल तपाईको बाथरूम डिजाइनको बाँकीको साथ निर्बाध मिश्रण गर्दछ। स्पष्ट रूपमा तपाईले तपाईको बाथरूममा कालो फराकिलो बाथरूम नलसँग फरक पार्न सक्नुहुन्छ। सबै भन्दा पहिले किनभने कालो व्यापक बाथरूम faucets विशेष हो। धेरै व्यक्तिले उनीहरूको बाथरूममा यो बोल्ड डिजाइन प्रयोग गर्ने हिम्मत गर्दैन, त्यसैले तपाईं WWOW को कालो फराकिलो बाथरूम नलको साथ तपाईको बाथरूमलाई विशिष्ट रूपमा डिजाईन गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिम ठाउँमा होइन किनकि यसले तपाईंको बाथरूममा यस प्राकृतिक फोकस पोइन्टलाई कम महत्त्व नदिन सम्पूर्ण उत्थान दिन्छ। तपाईंको बाथरूम निश्चित रूपमा WOWOW को कालो फराकिलो बाथरूम नलको साथ मानकबाट टाढा हुनेछ। कुनै श doubt्का बिना कोही तपाइँको आफ्नै अनुपम बाथरूम प्राणी देख्नुहुन्छ, यस संग चकित हुनेछ। र अन्तिम ठाउँमा होइन किनभने तपाईंले छनौट गर्नुभएको शान्त कालो फराकिलो बाथरूम नलका कारण।
स्टाइल अघि तपाईंले विचारात्मक रूपमा कार्यात्मक अनुप्रयोग लिनु पर्छ। राम्रोसँग डिजाइन गरिएको बाथरूमको उद्देश्य के हो जुन तपाईंको आवश्यकताहरूको सेवा गर्दैन? स्पष्ट रूपमा तपाईले निर्णय लिनुहुन्छ कि तपाईको बाथरूम उपकरण तपाईको व्यक्तिगत इच्छाको लागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हो। डिजाइनको भाग जस्तै, बाथरूम faucets एक सानो प्रभाव संग सानो छ। त्यो स्पष्ट रूपमा कार्यक्षमतामा पनि लागू हुन्छ।
राम्रोसँग संयोजन व्यापक बाथरूम नल
WOWOW कालो व्यापक बाथरूम नल अधिकांश बाथरूमको लागि उपयुक्त छ। तर पक्कै पनि यो तपाइँको बाथरूम डिजाइनको बाँकी भागसँग एक सुसंगत अंश हुनुपर्छ। WOWOW यसैले मिल्दो कालो बाथरूम faucets, जस्तै कालो नुहाउने faucets, कालो बाथटब faucets र कालो बाथरूम نلहरू। यस तरीकाले तपाईले बाथरूमलाई कालो बाथरुमको नलसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं यसको साथ एक विशाल छाप बनाउनु हुनेछ! र यस बाहेक, WOWOW कालो व्यापक बाथरूम नल तपाइँ तपाइँको कार्यक्षमता को लागी प्रदान गर्दछ। यो कालो फराकिलो बाथरूम स्थिरता बाथरूम फिक्स्चरको आधुनिक, न्यूनतम र अझै समकालीन उत्पादन लाइन बनाउन डिजाइन गरिएको थियो। जे भए पनि WOWOW को यो कालो व्यापक बाथरूम नल दुबै चम्किलो र परिष्कृत छ। एकीकृत पप-अप स्टपर एकीकृत डिजाइन गरिएको छ, र अझै सम्म तपाईं एक चिकनी नियन्त्रण प्रदान गर्दछ। जो कोहीले पनि यो कालो फराकिलो बाथरूमको नल देख्छ यसको डिजाइन र कार्यक्षमताबाट प्रभावित हुनेछ। यो पक्कै स्पष्ट र अद्वितीय दृष्टि संग डिजाइन गरिएको थियो। तपाइँको सिink्कका लागि उच्च-गुणवत्ता फराकिलो बाथरूम नल, यसको सबै उत्पादनहरू जस्तै, WOWOW यस व्यापक बाथरूम नलका लागि सबै भन्दा राम्रो गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गर्दछ। तपाईले उदाहरणका लागि याद गर्नुभयो यो व्यापक बाथरूम नलको ह्यान्डलहरू प्रयोग गर्दा। गुणस्तरले राम्रो स्थिरता र लामो जीवन प्रयोगको ग्यारेन्टी गर्दछ। विशेष उच्च वर्ग फुटबल उदाहरणका लागि डिजाइन गरिएको थियो कि ड्रप यसको लम्बाइका कारण स्प्ल्याटर हुँदैन। यस व्यापक बाथरूम नलको सतह कालो छ, तर जडानहरू काँसाले बनेका छन्। ठोस काँसाका सामग्रीहरू निश्चित अन्य धातु सामग्रीहरूको तुलनामा राम्रो विकल्प हो। उदाहरणका लागि क्षयका लागि तपाई चिन्तित हुनु पर्दैन। यस कालो फराकिलो बाथरूम नलको टिकाऊपन ग्यारेन्टी गरिएको छ। यसका साथै सतह एन्टी स्क्र्याच पनि हो, त्यसैले तपाईं लामो अवधिको लागि नयाँ रूपको ग्यारेन्टी हुनुहुनेछ। तपाईंको सिink्कको लागि यो उच्च-गुणस्तरको कालो फराकिलो बाथरूम नल तपाईंको बाथरूम डिजाइनको उत्तम फिनिशिंग टच हुनेछ।
सजिलोसँग स्थापना गर्न कालो फराकिलो बाथरूम नल
WOWOW कालो व्यापक बाथरूम नल यसको द्रुत स्थापना गाईडको साथ स्थापना गर्न सजिलो छ। चिसो र तातो पानी सजिलैसँग द्रुत-स्थापना जडानकर्ता संग जोडियो। बाथरूमको नल र ह्यान्डलहरूका लागि तपाईंलाई १ "-१..1" को तीन प्वाल चाहिन्छ र सिink्क डेक ०.२ "-१.२" बाक्लो हुन सक्छ। WOWOW कालो व्यापक बाथरूम नल सेटअप गर्न सकिन्छ एक अर्काको 1.5 देखि 0.2 इन्च, केवल तपाईंको आफ्नै शैली अनुसार। जस्तो कि कालो फराकिलो बाथरूम नल पनि सजीलो गर्न-कायम राख्नको लागि छ, WOWOW यसको उत्पादनमा year बर्षे वारंटी प्रस्ताव गर्न डराउँदैन। आइटम यसको-०-दिन निःशुल्क रिटर्न नीतिले पनि कभर गरिएको छ। WOWOW ले यसको कालो फराकिलो बाथरूम नलमाथि भरोसा गर्दछ र केवल १००% ग्राहक सन्तुष्टिको साथ सन्तुष्ट हुन सक्छ! संक्षिप्तमा WOWOW कालो फराकिलो बाथरूम नलका फाइदाहरू:
Classic क्लासिक र आधुनिक डिजाइनको अनुपम संयोजन
Bathroom अन्य बाथरूम faucets संग संयोजन गर्न सजिलो
Best सबै भन्दा राम्रो प्रकार्य प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको आवश्यकता अनुसार मिल्छ
High उच्च प्रदर्शनको साथ एस्टेटिक्सलाई जोड्दछ
स्प्रेयर पुल आउटको साथ किचनको नल
भान्साको नल स्प्रे हेड
भान्साको नल तल तान
SKU: 2320300B विभाग: बाथरूमको नल, डबल ह्यान्डल बाथरूम नल टैग: काले, अलग ह्यान्डल, दुई ह्यान्डलहरू
23 लागि समीक्षाएँ WOWOW कालो बाथरूम नल अलग ह्याण्डल स्विभल टाउको संग
तपाईं यो सेटको साथ गलत जान सक्नुहुन्न! तिनीहरू अत्यन्त राम्रो बनाइएको र भारी शुल्क हो जुन मूल्यको लागि मैले आशा गरेन। हामीले होम डेपोमा हेरेका थियौं र पहिले कालो सिink्क faucets को लागि। कुनै पनि लगभग राम्रो थिएन र सबै कम्तिमा डबल वा ट्रिपल मूल्य थिए। हामी यो सेटसँग अत्यन्तै सन्तुष्ट छौं!
जे *** ई2020-06-25
मूल्यको लागि महान उत्पादन, तपाईंलाई कहिले पनि थाहा हुने थिएन कि यो १०० डलर मुनि थियो। राम्रो र पातलो देखिन्छ र मलाई म्याट फिनिश मन पर्छ। मेरो बाथरूममा राम्रोसँग फिट हुन्छ र धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ।
बिल्कुल यस नललाई माया गर्नुहोस्! एक उचित मूल्य मा राम्रो र भारी! Months महिना पहिले स्थापना गरिएको र कुनै समस्याहरू छैनन्। राम्रो म्याट कालो हाम्रो अन्य बाथरूम सामान पूर्ण रूपमा मेल खान्छ।
साँच्चिकै हेर्नको लागि र नल र नबहरूमा तर ड्रेन स्टपरको शीर्ष रंग बदल्दै जान्छ। मैले खरिद गरेको पहिलो सेट मैले फर्काएँ किनकि हामीले पहिलो पटक प्रयोग गरिसकेपछि यसले सेतो-ईश रंगमा परिवर्तन भयो। हामीले प्रतिस्थापन प्राप्त गर्यौं र दोस्रोले यो पनि गर्‍यो। म धेरै गम्भीर छु। मलाई हाम्रो नयाँ बाथरूममा फिक्स्चरको हेराई मनपर्दछ तर स्ट्यापरमा के भइरहेको छ भनेर पत्ता लगाउन सकिन। हामीले फरक टुथपेस्ट र साबुनहरू चलाएर हेर्‍यौं कि यसले केही फरक पार्‍यो कि छैन। हामीले बिभिन्न सफाई समाधानहरू र जादू इरेजरलाई सफा गर्न कोसिस गरेका छौं तर विकृतिमा केहि पनि सहयोग गर्दैन। यदि मैले यो ड्रेनेन स्टापर कभरहरूसँग गरिरहेको छैन भने मैले यो निश्चित रूपमा तँलाई5तारा दिनेछु!
यस बाथरूमको नलको गुणवत्ता मात्र भयानक छ। मैले पहिल्यै भन्न सक्छु कि यो निश्चित रूपमा राम्रोसँग बनाइएको थियो र भारी शुल्क। मैले यस प्रकारको बाथरूमको नलको लागि जता पनि हेरे, तर ती मध्ये कुनै पनि मेरो बाथरूम सिink्कमा फिट हुने सही जस्तो मन पराउँदैनन्। अन्य स्टोरहरूमा मूल्यहरू यसभन्दा बढी महँगो हुन्छन्। स्थापना प्रक्रिया एकदम स्पष्ट थियो र सबै मानिन्छ जस्तो लाग्छ। प्रक्रिया धेरै सफल र सजिलो पनि छ। ड्रेन स्टापर पनि सेटमा समावेश गर्न राम्रो चीज थियो। रंग ठ्याक्कै त्यो रंग हो जुन मैले खोजिरहेको थिए। बाथरूमको नल बाथरूममा धेरै बाहिर खडा हुन्छ। म यो उत्पादन कसैलाई सिफारिस गर्दछु र तपाईंलाई पक्कै पनि लाग्नेछ कि यो तपाईंले खरीद गरेको हरेक प्रतिशतको लागि लायक छ।
एल *** ई2020-07-02
अहिले सम्म, यति धेरै महान! यी मध्ये दुई स्थापना गर्न मेरो श्रीमान्लाई केहि घण्टा लाग्यो तर केवल किनभने अवस्थित फिक्स्चरहरू हटाउन गाह्रो थियो। मलाई पुश ड्रेन मन पर्छ ... बच्चाहरूको लागि प्रयोग गर्न सजिलो। फिक्स्चरहरू फ्लैट कालो छन् वर्णन गरिए अनुसार र तपाईले के पाउनुहुन्छ केको लागि मूल्य। यदि केहि परिवर्तन भयो भने, म निश्चय पनि यस समीक्षालाई अपडेट गर्नेछु।
म यस नल सेट को उपस्थिति, कारीगरी र गुणवत्ता संग धेरै खुसी छु। फिनिश सुन्दर छ। प्याकेजिंग सहित यो सेटको बारेमा सबै कुरा समान मूल्यवान 'बिल्डर' क्वालिटी लोव र होम डिपोमा बेच्ने भन्दा धेरै उत्तम छ।
जी *** y2020-07-28
हाम्रो भाँडाको साथ साँच्चिकै ठूलो हिर्काउँदछ जुन हामीले किनेको थियो जुन मार्बल काउन्टरटपमा तीन प्वालहरू काटिएको थियो। मेरो श्रीमान्‌को मृत्युको लागि गुदगुना थियो यो स्थापना गर्न कत्तिको सजिलो थियो, भन्दा धेरै सजिलो। यति सजिलो छ कि उसले मलाई हाम्रो अन्य बाथरूमको लागि दोस्रो खरीद गर्न भन्यो जुन हामी अहिले फेरि गर्दैछौं। त्यसो भए! यो वास्तवमै सुन्दर छ र यसको केही वजन छ, यो चिन्जी मात्र होईन।
बाथरूम अद्यावधिक गरियो र प्रक्रियामा हामीले बुझे कि हाम्रो पुरानो नल रिस्ट भएको थियो। हामीले यो नयाँ कालो नल स्थापना गर्नुभयो र आश्चर्यजनक छ! यो एकदम राम्रो देखिन्छ, यो स्थापना गर्न सजिलो थियो, र मलाई पुश / पप-अप नाली मन पर्छ!
यो नल सुन्दर छ। यो अग्लो छ तर धेरै अग्लो छैन। यो कठोर रूपमा बनेको छ। यो कुनै पनि सस्तो लाग्दैन। यो एक महान मूल्य र गुणवत्ता उत्पादन हो।
यो मेरो छोरीको बाथरूममा स्थापना गरियो र यसले राम्रोसँग काम गर्यो। स्थापना गर्न सजिलो, राम्रो देखिन्छ र राम्रो काम गर्दछ। पहिले नै अधिक किन्नुहोस् र उही समानको साथ अन्य बाथरूम faucets प्रतिस्थापन गर्ने योजना छ।
यो एक बाथरूम रिमोडल को लागी किन्नुहोस्। अत्यन्त राम्रो नल र मूल्य उत्तम छ। पपअप ड्रेनहरूको प्रशंसक होइन तर यस मूल्यमा गुणवत्ताको लागि यसको लायक छ।
ठुलो बक्स घर सुधारका खुद्रा विक्रेताहरूमा किनमेल गरिसकेपछि, मेरो श्रीमान्ले यी फिक्स्चरहरू WOWOW मा फेला पार्नुभयो र उनीहरू पसलहरूमा ती चीजहरूको आधा मूल्यका थिए। म भन्दा सस्तो स्केटि Being भएको कारण म पैसा बचत गर्न उत्साहित भएँ, विशेष गरी जब समीक्षा एकदम राम्रो थियो। यी फिक्स्चरहरू तपाईंको उदाहरणका हुन् जुन तपाईंले भुक्तानी गर्नुभयो भन्दा बढी पाउनुहुनेछ। डिजाइन राम्रो छ र प्याकेजिaging्ग धेरै राम्रो थियो - यो सतहहरूको जस्तै सुरक्षात्मक थियो जसरी आमाबुवा किशोर किशोरीका लागि हुन्छ। केवल नकारात्मक यो हो कि ह्यान्डल फिनिशमध्ये एकमा यसमा धेरै बेहोश सतह खरोंचहरू थिए। सबै प्याकेजि Give दिईएको छ, यो देखेर आश्चर्यजनक थियो तर शायद QC त्यो रनमा स्नुज गर्दै थियो। भाग्यवश अपूर्णताहरू पछाडि छन् त्यसैले कसैले पनि तिनीहरूलाई कहिल्यै देख्ने छैन बाहेक सायद मैले आफ्नो घाँटीलाई एउटा अप्राकृतिक कोणमा झुकाएँ भने। हामीसँग सेट फिर्ता पठाउन समय थिएन। नल अधिकांश बाथरूम faucets तुलनामा धेरै अग्लो छ जुन अग्लो बोतल भर्नका लागि राम्रो छ। हामी मित्रलाई निश्चित रूपमा यो उत्पादन सिफारिस गर्दछौं।
मैले यो बाथरूमको लागि किनेको हो जुन भविष्यमा हामी पुनःनिर्माण हुनेछौं, त्यसैले म यसमा धेरै पैसा खर्च गर्न चाहन्नथें, त्यसैले मसँग अन्य बाथरूमहरूमा जस्तै प्रीमियम क्वालिटी मोन वा डेल्टा नल खरीद्नुको सट्टा मैले यो किनें। एक थोरै मलाई थाहा थियो म आधा मूल्यको लागि राम्रो गुणस्तरको नल प्राप्त गर्दैछु! सबै जडानकर्ताहरू (द्रुत कनेक्ट फिटिंग बाहेक) धातु हुन्। यो मरो कास्ट धातु वा क्रोम रंगको प्लास्टिक छैन - यो धातु फिटिंग र कनेक्टरहरूको साथ एक धातु नल हो। यो दुई पटक मूल्यमा प्रीमियम ब्रान्ड faucets को मामला मा छैन। गुणवत्ता उत्कृष्ट छ, डिजाइन उत्तम र स्थापना गर्न सजिलो छ, र समाप्त टिकाऊ र दाग प्रतिरोधी छ। यो घरमा हाम्रो मनपर्ने बाथरूम नल बनेको छ। यो प्याक गरीएको थियो र उचित रूपमा सुरक्षित गरिएको थियो र यो आइपुगेको बेरुखी अवस्थामा। केवल नकारात्मक कुरा मात्र म भन्न सक्दछु स्थापना निर्देशनहरू अझ स्पष्ट हुन सक्छ र केहि व्याख्याको अभाव थियो। त्यस बाहेक, यो वास्तवमै ठूलो खरिद हो- जब समय आउँछ मेरो अन्य faucets प्रतिस्थापन गर्न को लागी म खोज्दै हुनेछ बिग ब्रान्ड को नाम तिर्न को सट्टा। अत्यधिक सिफारिश गरिएको।
उत्तम! मैले यसभन्दा अघि जस्तो कहिले पनि स्थापना गरेको छैन, र मलाई निश्चित छ कि यसले मलाई थोरै समय लिएको थियो किनकि यो मैले गरेको पहिलो पटक थियो - तर वास्तवमै यो आफैले गर्न कठिन थिएन। सब भन्दा गाह्रो अंशले पुरानो नललाई हटाइरहेको थियो। यो व्यापक नल संग वास्तवमा खुसी मा।
उत्तम! मैले यसभन्दा अघि जस्तो कहिले पनि स्थापना गरेको छैन, र मलाई निश्चित छ कि यसले मलाई थोरै समय लिएको थियो किनकि यो मैले गरेको पहिलो पटक थियो - तर वास्तवमै यो आफैले गर्न कठिन थिएन। सब भन्दा गाह्रो अंशले पुरानो नललाई हटाइरहेको थियो। वास्तवमै खुसीको साथ WI प्रतिस्थापन3बाथरूम faucets यी संग। सुपर सजिलो स्थापना गर्नुहोस् यदि तपाईंको प्वालहरू सही आकारका छन्, मेरा थिएनन्। मैले सोचे कि तिनीहरू सबै एकै खालका थिए। एक पटक मैले मेरो प्वालहरू ठूल्दा ​​ड्रिल गरें मसँग कुनै समस्या थिएन। तिनीहरू सि the्क माथि माथि बस्छन् जसले ठूलो सिink्कको स्वरूप दिन्छ। तिनीहरूले मसँग भएको भन्दा बढि टाँसेनन्।
हामीले एउटा नयाँ भिन्नी किन् जुन "नि: शुल्क" नलका साथ आएको थियो, यो सस्तो थियो त्यसैले हामीले यसको सट्टा केहि खरीद गर्ने निर्णय गर्यौं। हामी ठूला बक्स घर सुधार स्टोरहरुमा गयौं र मेरो स्वाद र करिब। १ for० को लागी सबै कुरा एकदम आधुनिक थियो। हामीले अनलाइन जाँच गर्ने निर्णय गर्‍यौं र यो एक हामीले हामीले तिर्ने आधा सजीलोका लागि फेला पार्यौं। यो हाम्रो जिंक काउन्टरटपको साथ धेरै सुन्दर देखिन्छ र धेरै कडा महसुस गर्दछ।
V *** ई2020-08-11
मेरो लि gender्ग बिरुद्द भेदभाव नगर्ने होइन, तर म एक महिला हुँ जसले मेरो बाथरूम सिink्क र नललाई आफैं बदल्न चाहान्थे। मैले यो नल किनें, यसलाई खोलें र minutes 45 मिनेट भित्रमा यो मेरो नयाँ सि new्कमा स्थापना भयो। सजिलो स्थापना गर्नुहोस् !!
यी टाढासम्म मैले ल्याएकै सबैभन्दा राम्रो faucets हो। हामीले भर्खरै पुन: निर्माण गर्‍यौं, र मैले अरुलाई "नाम ब्रान्ड" भनेर किनें तर चाहन्थें म यी सबै पाएको थिएँ। तिनीहरूले सबै कुरा सोच्न! उत्पादन उच्च गुणवत्ताको छ। यी किन्नुहोस् र तपाईं पछुताउनु पर्दैन।
मैले यिनीहरू मध्ये दुईलाई हाम्रो मास्टर नुहाउने कामका लागि किनें। मसँग एक सेटमा अलिकता समस्या आएको थियो तर कम्पनीले यसमा ध्यान दियो कि कुनै समस्या बिना फिनी फिर्ती। म क्वालिटी र सेटको हल्का पुरानो लुकमा धेरै प्रभावित छुँ उनीहरू हाम्रो डेकरको साथ पूर्ण रूपमा जान्छन्।
यो नल यसको एक धेरै राम्रो देखिन्छ फिनिश। नलको ब Theنड माथि माथि बस्दछ त्यसैले त्यहाँ तपाईंको हात धुने ठाउँ छ। समावेश गरिएको नाली टुक्रा, उत्कृष्ट पनि छ।
एक साँच्चै सुन्दर नल सेट। तिनीहरू मेरो नयाँ व्यर्थमा उत्कृष्ट देखिन्छन्। एउटा पप अप नाल हराइरहेको थियो, र ग्राहक सेवाले तुरून्त जवाफ दियो कि उनीहरूले पठाइरहेका छन्।
WOWOW बाथरूम बेसिन मिक्सर ट्याप कुंडा स्पुत संग
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस टेलिफोन: 3476134901 इ-मेल: বিক্রয়@wowowfaucet.com